पुनर्मिलनको प्रेरक सत्य कथा::Hamrodamak.com
निर्णय लिदा हामीले सधैं आफु भित्र निहित क्षमता तथा सहनशक्तिका आधारमा लिने गर्नु पर्दछ।
हरेक मनुष्यलाई उसको कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुने गर्छ भन्ने हाम्रो आम मान्यता रहने गरेको छ। यो कुरालाई विभिन्न धर्म ग्रन्थहरुमा पनि उल्लेख गरिएको हामीले सुनेको छौँ। तर मनुष्यलाई कर्म गर्नका लागि के ले प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा भने निक्कै महत्वपूर्ण छ। सामान्यतया मनुष्य भित्र उत्पन्न हुने सोच र त्यस सोच अनुरुप उसले लिने निर्णयले नै उसलाई कुनै कर्म गर्नका लागि प्रेरित गरिराखेको उक्साइ राखेको हुन्छ। यसको अर्थ मनुष्यलाई प्राप्त हुने कर्मफल अथवा मनुष्यको भाग्य उसको सोच (मनको स्थिति) र उसले लिने निर्णय संग जोडीएको हुने रहेछ भनेर बुझ्न हामीलाई कठिन भएन।
यो लेखमा यस्तै बिषय संग जोडीएको एउटा सत्य घटना यहाँहरु संग तल शेयर गर्दै छु। यो घट्नाले हार्मो जीवनका विभिन्न मोडहरुमा हामीलाई नयाँ ढंगले सोच्न र प्रस्तुत हुन सहयोग पुर्याउने मैले आशा गरेको छु। (स्रोत: ‘वान इकुएसन टु मेनेज योर फिलीङ्स्’ – मोटिभेसनल टकिङ प्रोग्राम)।
पतिको यस्तो कुराले उनी एक्दमै आहात हुन्छिन्। यो अवस्थामा उनी आफ्नो आमाबाबु भएकोमा फर्किएर जाने कुरा पनि सोच्न सक्दिन किनकी उनका आमाबाबुले यो कुरालाई सहन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको उनलाई राम्रो संग ज्ञान थियो। पतिको यस्तो ब्यवहारले गर्दा उनी दु:ख, पीडा र तिरस्कारको अनुभुतिले दिन प्रतिदिन पूर्णतया निराश बन्दै गएकी हून्छिन्। अब कस्का र केका लागि बाँच्ने? उनका सामु जीवन जिउने कुनै पनि आधार देखिदैन। अन्तत: एक दिन उनले आफ्नै घरको छत बाट हाङ्फालेर आफ्नो जीवननै समाप्त पार्ने निर्णय गर्छिन् र घरको छतमा पुग्छिन। हाङ्फाल्ने उदेश्यले छतमा अघी बढ्दै जादा उनका नजरहरु आफ्नो घर बाट अलिक पर रहेको एउटा योग सेन्टरको भवनमा ठोक्किन पूग्छन्।
अहिले सम्मको स्थितिको समिक्षा:- पति आफ्नो पत्नी बाट अथाह प्रेम पाइराखेको अवस्थामा पनि उनी देखि टाढा जान खोजी राखेको छ। उता पत्नी आफ्नो पतिको यस्तो वास्तविकताको बारेमा थाहा पाए संगै उनी अनेकौँ भय, पीढा र तिरस्कार बाट ग्रसित छिन् जसका कारणले गर्दा उनी भित्र सकारात्मक नभएर नाकारात्मक ऊर्जा रेडिएट हुन थालेको अवस्था छ। उनको यो व्यवहारले पहिले बाट नै टाढिन खोज्दै गरेको उनका पतिका लागि अझ टाढा जाने थप बहाना मिलेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरुलाई कस्तो लाग्छ, के यि महिलाका लागि अरुकुनै विकल्प हुन सक्ला? जसले उनको जीवनमा उत्पन्न परिस्थितिमा कुनै सुखद परिवर्तन ल्याउन सकोस्। के यो सम्भव छ/ होला ?
तिम्रो पतिको ब्यवहार अहिले जस्तो सुकै भए पनि तिम्रो ब्यावहारमा भने अझै पनि तिमी उसलाई पहिला जत्तिकै माया र सम्मान गर्छौ भन्ने कुरा झल्कन सक्नु पर्छ। गुरु अगाडि भन्छन्, मलाई थाहा छ यो अभ्यास गर्न तिम्रा लागि अहिले त्यति सहज छैन तर आफ्नो टुट्न लागेको सम्बन्धलाई बचाउनका लागि यो असम्भव पनि छैन। जब तिमी यसो गर्नका लागि मानसिक रूपले तयार हुन्छौ, तिमी बाट नाकारात्मक उर्जा रेडिएट हुने सम्भावना एकदमै न्युन रहने छ। यसले पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनका लागि आधारभूत सूत्रका रुपमा काम गर्ने छ।
गुरु संगको परामर्श पश्चात, अब त्यसै अनुरुप आफुलाई प्रस्तुत गर्ने संकल्पका साथ ति महिला आफ्नो घर फर्किन्छिन्। पति पत्नी बिचको सम्बन्धलाई टुट्न नदिनका लागि उनले आफ्नो तर्फ बाट अधिकतम प्रयास गर्छिन्। तर सम्बन्धमा सुधार आउनको बद्लामा उनका पति अझ पहिलाको भन्दा पनि इरिटेटिङ रुपमा प्रस्तुत हुने गर्छन्। पतिको यस्तो ब्यवहारले उनी थकित हुन्छिन् र फेरी एकपटक उनै आध्यात्मिक गुरुलाई भेट्न पुग्छिन्।
तथापि, हुने हार दैब नटार भने जस्तै यि सबै प्रयासहरूको बावजूद पनि अन्ततः एकदिन उनका पति अफिसकी अफेर वाली विदेशी महिला संग आफ्नो मुलुक बाटनै बाहिरिएको खबर उनलाई प्राप्त हुन्छ। जुन खबर उनले फोन मार्फत अफुलाई गाइड (मार्गदर्शन) गर्ने आध्यात्मिक गुरुलाई पनि सुनाउछिन्। प्रतिक्रियामा गुरुले उनको अवस्था/मनोदशाका बारेमा सोध्छन् र उनले आफु अविचलित र स्थिर रहेको जानकारी गराउछिन्। उनि यसकारण अविचलित र स्थिर थिइन किनकी उनले आफ्नो सम्बन्धलाई बचाउनका लागि कुनै पनि कसर बाकी राखेकी हुन्नन् अर्थात हर सम्भव प्रयास गरेकी हुन्छिन्। यसमा अफसोस गर्नका लागि उनले केहि पनि छोडेकि हुन्नन्।
ति महिला बौद्धिक रुपमा त पहिला बाटनै सबल थिइन नै तर गुरु संगको परामर्शले उनलाई मानसिक/भावनात्मक रुपमा पनि उत्तिकै सबल बनाएको थियो। पतिले छोडेर गए संगै उनले जब गर्न सुरु गर्छिन्। उनको जीवन सामान्य रूपमा चल्दै गरेको हुन्छ। पतिले छोडेर गएको पनि लगभग छ महिना पुग्न लागेको हुन्छ। एक दिन बिहान अचानक उनको फोनको घण्टी बज्छ। यसो हेर्छिन, फोन मुलुक बाहिर बाट आएको हुन्छ। उनि फोन उठाउछिन् र हेल्लो भन्छिन्। उता बाट आवाज आउछ ‘आइ एम एक्स्ट्रिमली सरी, प्लिज फर्गीभ मी, आइ वान्ट टु कमब्याक होम’। यसो भनेर फोन गर्ने ब्यक्ति अरुकोही नभएर उनकै पति हुन्छन्। अब कल्पना गर्नुस्, उनले के आन्सर दिइन होला? खैर, यो अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले उसको जीवनको भाग्यको आधारमा आफ्नो आन्सर चयन गर्नेछ।